Isma lahayn Somalia ayaa kelitalisnimo dib ugu noqon doonta | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Isma lahayn Somalia ayaa kelitalisnimo dib ugu noqon doonta
Waxaa sidoo kale la sheegay in amarka madaxweynaha lagu soo xirxiray milkiilayaasha iyo suxufiyiinta ka shaqeynayey warbaahinada madaxbanaan ee Shabelle iyo Sky. Waxaa la xaqiijiyey in sirdoonka ka amar qaata madaxweynaha ay saddex ka mid ah suxufiyiinta ay soo xirteen ay ciqaabo ka baxsan bani aadaminimada kula kaceen iyagoo jirdil xoogan u geystey. Saddexda masuul oo ah madaxda warbaahinta Shabelle iyo Sky waxey kala yihiin milkiilaha Shabelle mudane Cabdimaalik Yuusuf Maxamud; madaxa wararka Shabelle mudane Axmed Cabdi Xasan, iyo madaxa warbaahinta Sky mudane Maxamud Maxamed Carab.
Madaxdaas warbaahinta madaxabanaan waxaa loo geystey gaboodfal ka dhan ah Soomaalinimada, islaanimada, iyo aadaminimada iyaga oo jirkooda lagu qabtay koronto xoog badan, dhaawacyana ay jirka gudahiisa ka soo gaareen garaacis wuxuushnimo ah oo lagula kacay. Sidaas oo ay tahay ayaa haddana waxaa loo diyaarinayaa ciqaabihii lagu xalaaleyn lahaa xukunkooda. Dadkaas waxaa loo diidey ehelkooda iney soo arkaan xaaladooda caafimaad oo aad looga deyrinayo iyo in loo ogolaado iney soo booqdaan dhaqatiir daryeesha caafimaadkooda.